पोल खुलेपछि कोच आस्थालाई तनाब ! श्रृंखला जोशीलाई छान्नुको भित्री कारण यस्तो पो रहेछ ( भिडियो हेर्नुस ) – Nepal Trending
पोल खुलेपछि कोच आस्थालाई तनाब ! श्रृंखला जोशीलाई छान्नुको भित्री कारण यस्तो पो रहेछ ( भिडियो हेर्नुस )
काठमाडौं । भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ की कोच आस्था राउतको झूर प्रतियोगी छान्ने अनि गाली खाने क्रम जारी छ। उनी कहिले अन्य कोचको इशारामा प्रतियोगी छान्छिन् त कहिले अति झूर गाए पनि कुर्सी घुमाइदिन्छन्। अनि राम्रो गाउने प्रतियोगीमा मौन बसिदिन्छिन्। उनले यसअघि अमेरिकाबाट आएकी सम्झनाले सुर न तालको गीत गाए पनि छानिदिएकी थिइन्। ब्लाइन्ड अडिसनको १२ औं भाग सकिँदा यस्तै भयो फेरि।
११ औँ एपिसोडमा सिक्किमबाट सहभागी नवीन गजमेरले राम्रै गीत गाएका थिए। कोच राजु लामाले झन्डै झन्डै बज गरिसकेका थिए तर गरेनन्। उनले ‘आँशुको अर्थ के थाहा’ बोलको गीत गाएका थिए। आस्थाले धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने पार्ट खोज्दाखोज्दा नभेटेपछि बज नगरेको प्रतिक्रिया दिइन्। कोच राजुले नजिक नजिक पुगे पनि बज गर्न नसकेको भन्दै माफी मागे। कोच दीप श्रेष्ठ र प्रमोद खरेलले पनि गायनको प्रशंसा गर्दै नोट्समा समस्या देखिँदा वज गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
नवीनलगत्तै आइन्, श्रृंखला जोशी। ११ औं एपिसोडको अन्तिम प्रतियोगीको रुपमा मञ्चमा आएकी उनले देउडा गाएकी थिइन् तर झुर। कोच दीप, राजु र प्रमोदलाई गायनले तानेन। उनीहरु चुपचाप बसे। एक्कासि कोच आस्थाले बज गरिन्।
अघिल्लो प्रतियोगीले राम्रै गाउँदा पनि बज नगर्ने अनि झूर गाउँदा चैँ बज गरेपछि दर्शकहरुले सहन सकेनन् र भेदभाव गरेको भन्दै आस्थाको आलोचना गरे। आलोचनाको अर्को कारण पनि थियो। गीत गाउने को हो नदेखीकनै आस्थाले बज गरेकी थिइन्। श्रृंखला देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशीकी छोरी हुन्।
श्रृंखला आस्थाकी साथी रहिछन्। उनले श्रृंखलालाई ओई भन्दै कुराकानी गरेकी थिइन्। यसले दर्शकलाई झूर गाए पनि साथी भएर छानेको भान परिहाल्यो। आलोचना बढेपछि आस्थाले फेसबुकमा प्रस्टीकरणै दिनुप-यो, ‘नवीनले आधुनिक गीत गाएकाले अन्य कोचहरुले पनि छान्न सक्ने र यस अगाडि देउडा गाउने झुप्रीलाई छानेकाले उनीसँग ब्याटल राउन्डमा जोडीका लागि श्रृंखला छानेँ त के बिराएँ।’
तर भन्दैमा पत्याउने कसले ?